अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान विद्रोहीले अब छिट्टै सरकार निर्माण गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकार गठनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न चरणको वार्ता बुधबार सकिएको छ । यसपछि अब छिट्टै नै नयाँ सरकार निर्माण गरिने जानकारी तालिबानका नेताले दिएका छन् । उनीहरुले सरकार बनाउने सम्बन्धमा नै राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका थिए अफगानिस्तानका स्थानीय मिडियाले तालिबान समूहका …
पाकिस्तानले तालिबान सेना बनाउन सहयोग गर्ने
अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोडेर गएपछि तालिबानलाई देशमा स्थिरता कायम गर्ने चुनौती आइलागेको छ । यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानले आफ्ना शीर्ष सुरक्षा तथा गुप्तचर अधिकारीलाई अफगानिस्तान पठाएर तालिबान सेनाको निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । पाकिस्तानलाई सबभन्दा बढी जोखिम तहरीक–ए–तालिबान नामक आतंकवादी संगठनबाट छ । त्यस संगठनका लडाकूले पाकिस्तानी सैनिकहरूको ज्यान लिइरहेका छन् । उनीहरू अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान आउने अनि सैनिक मारेर उतै भाग्ने काम गरिरहेका छन् । विगत दुई दशकमा हजारौं पाकिस्तानी स...
अफगानिस्तान अब स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक : तालिबान
१५ भदौ, काठमाडौं । अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता गएसँगै अब अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको बताएको छ । मंगलबार काबुलस्थित हामिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमहरुसँग कुरा गर्दै तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता जानु ऐतिहासिक क्षण भएको बताएका छन् । उनले तालिबानको जित सबै अफगान नागरिकको जित भएको […]
अफगानिस्तान - तालिबान कति धनी छ ? कहाँबाट आउँछ पैसा ?
काठमाण्डौ – यही महिना तालिबानले पूरै अफगानिस्तान आफ्नाे कब्जामा लियाे । । आउँदो केही दिनमा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमी देशका सेना अफगानिस्तान छाडेर जाँदैछन् । यही कारण गएको दुई दशकदेखि दुई पक्षबीच चलिरहेको सङ्घर्ष सायद रोकिनेछ । तालिबानका लागि गठबन्धन सेनासँगको सङ्घर्ष निकै कठिन रह्यो । एकातर्फ उसको सामु विश्वका धनी देशका सेना थिए, जोसँग न पैसाको कमी थियो र न आधुनिक हतियारको नै । त्यस्तै अर्काेतर्फ तालिबानको स्थिति यी दुई मामिलामा ती देशको तुलनामा कुनै खास थिएन । यद्यपि एक अनुमानका अनुस...
अफगानिस्तान : पञ्जशीरका लडाकूसँग वार्ता गर्न खोज्दै तालिबान
अफगानिस्तान कब्जामा लिएको कट्टरपन्थी तालिबान समूहले पञ्जशीर प्रान्तका आफूविरोधी लडाकू समूहसँग वार्ता गर्ने बताएको छ।लडाइँमार्फत पञ्जशीर नियन्त्रणमा लिँदा निकै कठिनाइ र हताहती ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि तालिबानले वार्ताको माध्यम अपनाउन लागेको हो।तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले पञ्जशीरका लडाकूहरूलाई ‘आफ्ना भाइहरू’ भन्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरेका हुन्। पञ्जशीरका मानिसहरूले केही आपत्ति जनाएको भन्दै उनले वार्ता गर्न आफूहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल बनाइएको जानकारी पनि दिएका छन्।तालिबानले अफगा
तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तान सफल रुपमा कब्जा गरेपछि विश्व जगतमै नयाँ तरङ्गसँगै अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई विश्वका सबै देशले अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्काउन निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर भागेसँगै तालिबान सत्ता सम्हाल्ने तयारीमा छन् । तालिबानको कब्जाले विश्व क्रिकेटमा उदाउँदो शक्तिशाली अफगानिस्तान क्रिकेट टोलीलाई कस्तो असर पर्ला भन्ने […]
अफगानिस्तानमा तालिबानले विजय हाँसिल गरेको छ । तालिबान लडाकुले राजधानी काबुल कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा गएको हो । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति राष्ट्रपति अशरफ ग़नी देश छोडेर भागेका छन् । उनले छिमेकी देश उज्वेकिस्तानमा शरण लिएको खबरहरुमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भागेसँगै तालिबान लडाकुहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेश गरेर आफ्नो विजय घोषणा गरेका हुन् । तालिबानका प्रवक्ताले […]
अफगानिस्तानमा विदेशी नागरिकलाई खतरा छैन - तालिबान प्रवक्ता
काठमाण्डाै – अफगानिस्तान तालिबान विद्रोही समूहको नियन्त्रण नजिक पुगेको छ । तालिबान लडाकु ३४ वटा सबै प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रीय राजधानी काबुलमा प्रवेश गरिसकेकाले अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रण नजिक पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । तालिबान समूहले काबुलमा हिंसा नगर्न र बाहिरिन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा निस्किन दिन आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।तालिबान लडाकु काबुल प्रवेश गरेपछि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले तालिबान प्रतिनिधिसँग भेट गर्नुभएको छ । भेटमा घानीले ...
चार दिनमा ९५० तालिबान मारिएको अफगान सेनाको दाबी
काठमाडौं। पछिल्लो चार दिनमा भएको संघर्षमा ९ सय ५० जना तालिबान मारिएको दाबी अफगानिस्तानको सुरक्षा फौजले गरेको छ। सुरक्षा कारबाहीमा ५ सयभन्दा तालिबान लडाकु घाइते भएको जनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू र तालिबान लडाकुहरू बीच देशका २० भन्दा बढी प्रान्त र सहरमा भिडन्त तथा हिंसात्मक घटना भइरहेको छ। अमेरिका र नेटो सेनाले अफगानिस्तान छोड्न थालेपछि त्यहाँ तालिबान र सरकारी फौजबीच संघर्ष चर्केको
सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छाड्ने
काठमाण्डौ – आउँदो सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छाड्ने भएका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडनले आगामी सेप्टेम्बर ११ तारिखअघि सबै अमेरिकी सैनिकहरूले अफगानिस्तान छाड्ने घोषणाको तयारी गर्नुभएको अमेरिकाका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । गएको वर्ष तालिबान र डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनबीच भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकी सैनिकहरूले आउँदो मे महिनासम्ममा अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति बाइडनले मे १ तारिखको समयसीमामा सैनिकहरू फिर्ता गर्ने काम सक्न कठिन रहेको बताउँदै आउनुभएको थियो । आउँदो सेप्टेम्बर ११ ...